व्हिस्कीको स्वाद कहाँबाट आउँछ?-उद्योग समाचार-गोआलोङ लिकर (समूह)
व्हिस्कीको स्वाद कहाँबाट आउँछ?
कतिपय मानिसहरूको विश्वास छ कि विभिन्न पानीको गुणस्तरले व्हिस्कीलाई फरक सुगन्ध दिन्छ, जबकि कोहीको विश्वास छ कि जौको गुणस्तर व्हिस्कीको स्वादको लागि कुञ्जी हो। कच्चा मालले व्हिस्कीको स्वादलाई कसरी असर गर्छ भनेर जान्न निकै गाह्रो छ। तर जटिल परिवर्तन राम्रो सूत्र र उच्च गुणस्तर कच्चा माल द्वारा उत्पादित।
व्हिस्की डिस्टिलिंग प्रक्रियामा, सबैभन्दा महँगो चरणहरू अनाज किन्न, र त्यसपछि तिनीहरूलाई भिजाउनु हो। राम्रो जौ छनोट गर्नु सफलताको आधारशिला हो। केही डिस्टिलरीहरूले व्यक्तिगत रूपमा जौ चयन गर्नेछन्, तर धेरैले अझै पनि जौ कारखानामा जौ चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यलाई व्यवस्थित गर्छन्। प्रत्येक वर्ष समान मात्रामा माल्ट प्राप्त गर्न जौ अंकुरण गर्न मानक प्रक्रियाहरू छन्। धेरै जसो डिस्टिल माल्ट इङ्गल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया र अन्य देशबाट आउँछ। हाम्रो Goalong चिनियाँ एकल माल्ट व्हिस्की अस्ट्रेलिया माल्टबाट 100% हो।
व्हिस्कीको लागि जौ मात्र कच्चा पदार्थ होइन। तपाईं मकै, राई, गहुँ, अनाज वा जई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर जौ अझै पनि पहिलो छनौट हो किनभने यसले व्हिस्कीको लागि सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा धनी सुगन्ध प्रदान गर्न सक्छ।
व्हिस्कीको लागि पानीको शुद्धता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। व्हिस्की डिस्टिलिंग प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको पानीको मात्रा अविश्वसनीय छ। माल्टिङ, डिस्टिलेसन र बोतलिङका लागि पानी चाहिन्छ। व्हिस्की डिस्टिल गर्नको लागि प्रयोग हुने पानीलाई लगभग तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, कडा पानी, क्रिस्टलीय शुद्ध पानी र पीट पानी।
A. कडा पानी खनिज लवण भएको पानी हो, जुन प्राय: ग्रेन्जर र हाइल्याण्ड पार्क जस्ता डिस्टिलरीहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
B. क्रिस्टल शुद्ध पानी त्यो पानी हो जुन क्रिस्टलीय चट्टानमा तलको तहमा छिर्न अघि टपकिन्छ। यो पानीले यसको प्राकृतिक स्वाद र थोरै अम्लता कायम राख्छ। यो स्कटल्याण्डमा सबैभन्दा सामान्य छ र स्थानीय शुद्ध पानीमा पौराणिक रंग थप्छ।
C. पीट पानी सामान्यतया खाडी क्षेत्रबाट लिइन्छ, पीट सामग्रीले भरिपूर्ण, हल्का पहेँलो वा खैरो रङ्गको पनि हुन्छ, र प्रायः लागाभुलिन र बोमोर जस्ता व्हिस्की प्रकारहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
खमीर प्रत्येक डिस्टिलरीको अद्वितीय अमृत हो, र कोही पनि आफ्नो गोप्य नुस्खा बाहिरीहरूसँग साझा गर्न चाहँदैनन्। यी गोप्य व्यञ्जनहरू वास्तवमा सबै प्रकारका कवक हुन्। खमीर कार्य भनेको व्हिस्कीलाई फराकिलो र समृद्ध सुगन्ध पदानुक्रम दिनु हो। प्रत्येक डिस्टिलरीले सावधानीपूर्वक एक विशेष सूत्र तयार गर्दछ, केहि मात्र एक प्रकारको खमीर प्रयोग गर्दछ, र केहि सात प्रकार को प्रयोग गर्दछ। व्हिस्की डिस्टिलेसन प्रक्रियामा यी सबै खमीरहरू गायब हुनेछन्, केवल व्हिस्कीको अद्वितीय फलफूल सुगन्ध छोडेर।
एक बोतल माल्ट व्हिस्की उत्पादन गर्न करिब १० लिटर पानी र १.४ केजी जौ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो देख्न सकिन्छ कि प्रचुर मात्रामा पानी र उत्कृष्ट पानीको गुणस्तरले व्हिस्कीको उत्पादनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ।
अघिल्लो: अमेरिकी व्हिस्की
अर्को: जोनी वाकर व्हिस्कीको बारेमा कुरा गर्दै